निगमले पेट्राेलियमकाे मूल्य बढायाे, पेट्राेल सय ग्यास १३५० रुपैयाँ - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
निगमले पेट्राेलियमकाे मूल्य बढायाे, पेट्राेल सय ग्यास १३५० रुपैयाँ
मङि्सर २२, २०७४ 1332 ऊर्जा खबर/काठमाडाैं
नेपाल आयल निगमले अज (शुक्रबार) राती १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रेलियमकाे मूल्य बढाएको छ । निगमको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले मूल्य बढाउने निर्णय गरेकाे हाे ।
निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा ३/३ रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँले बढाएको छ ।
राती १२ बजेदेखि लागू हुने पेट्रोलको मूल्य अब प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल मूल्य ७७/७७ रुपैयाँ र हवाई इन्धन -आन्तरीक ८७ रुपैयाँ भएको छ । त्यस्तै, हवाई इन्धन भने प्रतिहजार लिटर ८ सय ५० डलर कायम गरिएको छ ।
यो मूल्य काठमाडौं उपत्यका, सुर्खेत र दिपायलका लागि तय गरिएको हो । पोखरा र दाङमा भने पुरानै मूल्य कायम गरिए छ । वीरगञ्ज, विराटनगर, महेन्द्रनगर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज र धनगढी डिपोबाट १५ किलोमिटर दूरीमा खरिद गर्ने उपभोक्ताले प्रतिलिटर पेट्रोल ९८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल तथा मट्टीतेल प्रत्येकमा ७५ रुपैयाँ ५० पैसा मा खरिद गर्न पाउनेछन् ।
यसैगरी, ग्यासको मूल्य तराईमा १३ सय ५० रुपैयाँ तथा दाङ, कैलाली, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरमा १३ सय १५ रुपैयाँ कायम छ । नयाँ मूल्य अनुसार निगमको मासिक घाटा अब ४० करोड रुपैयाँमा सीमित हुने जनाइएके छ । हाल निगमको मासिक घाटा करिब एक अर्ब रुपैयाँ छ ।